FBC - Mootummaan federaalaa fi naannoleen paartilee addaddaan osoo bulanii seerri hariiroosaanii murteessu qophaa’e
FBC Wiixata Ebila 15 2010 E.C. - Monday, April 23 2018 G.C.
Turkitti torban darbe shororkeessitoonni 42 booji’amaniiru
Koomiishinarri Koomiishinii Mirga Namoomaa DhMG daawwii isaanii Ityoophiyaa har’a eegalu
Koonfaransiin Yuunvarsiitii Paan Afrikaa Adwaatti gaggeeffamaa jira
Paartiin Soshiyaal Dimookraats Jarmanii duree dubartii jalqabaa filate
Mootummaan federaalaa fi naannoleen paartilee addaddaan osoo bulanii seerri hariiroosaanii murteessu qophaa’e
Finfinnee, Amajjii 4,2009(FBC) –Aangoo mootummaa federaalaa fi naannoleerratti erga takkaa murteessuuf taayitaa heeran laatamee, waliin hojjechuu fi hariiroosaanii ilaalchisee seerri murteessu qophaa’e.
Heera mootummaarratti aangoo mootummaa federaalaa fi naannolee murteesseef keeyyattoota kaa’amanirratti, lameenifuu taayitaan walfakkaataa laatame ni jira.
Keeyyata 51rratti mootummaan federaalaa diinagdee biyyattii, hawaasummaa fi imaammata misoomaa, akkasumas karoora baasuuf aangoo qaba.
Keeyyata 52rrattimmoo mootummoonni naannolee diinagdee mataa ofii, hawaasummaa fi imaammata diinagdee, tarsiimoo fi karoora baasuuf aangoo qabu.
Heerichi mootummoota lameenif aangoo walfakkaataa laate keessaa kanneen akka fakkeenyaatti akka eeraman dhaabbata qorannoo sirna federaalaa Yuunvarsiitii Finfinneetti gargaaraan proofeesaraa Asaffaa Fissahaa ni himu.
Mootummoonni lameen mari’achuun dhimmoota kanneenirratti hojjechaa jiru.
Amma ammaatti garuu barmaatan gaggeeffamaa kan ture malee tumaaleen heeraa ba’anii hojiirra oolaa akka hin turre Mana Maree Federeeshiniitti daayreektarri cimsa hariiroo mootummootaa obbo Aschaalaw Taklee ni himu.
Hojimaanni barmaataa kun ammoo mootummaan federaalaa fi naannoleen aangoo laatameefirratti qixa murteessuuf humna akka hin qabaanne taasisuusaa gargaaraan proofeesaraa Asaffaan ni himu.
Dhimmoota waliiniirratti murteessuuf aangoon mootummaa federaalaa ol ba’eet muul’atas jedhan.
Manni Maree Federeeshiniis hariiroo mootummoota jidduu jiru kana seeran gaggeessuun akka danda’amuuf qorannaa waggoota 4 fudhate gaggeessuun wixinee seeraa qopheessuusaa ifoomsera.
Wixineen kunis dhimmoota waliiniirratti aangoo qaban kan murteessu ta’a.
Mootummaan federaalaa dhimmoota diinagdee fi hawaasummaa biyyoolessaarratti yoo karoorsu, mootummoonni naannoleemmoo karoora mataa ofii yammuu baafatan dhimmoota waliiniirratti akka mari’atan, kan waliin mari’atanirratti hirmaannaa fi aangoo murteessuu qixaan waliigalteerra akka ga’an seera dandeessisuu wixinichi.
Kun ammoo aangoo murteessuu qixa akka qabaatan isaan taasisa jedhan gargaaraan proofeesaraa Asaffaan.
Seerri kun qaawwota qabiyyee siyaasaa jiran cufuu akka dandeessisus ni himu.
Bu’aa filannoon naannolee fi mootummaan federaalaa paartilee siyaasaa addaddaan osoo bulanii, mootummaa mataa ofiis osoo hundeeffatanii, hariiroon paartilee kanneen jidduu jiraatu maal ta’uu akka qabu, hojimaataa fi imaammataan ifatti kan kaa’u ta’a.
Seerri qorannoo waggoota 4 fudhate kun, dhaabbilee barnoota olaanoo, bakka bu’oota ummataatin mariin ega irratti gaggeeffameen booda qaama dhimmi ilaaluf dhiyaatee kan ragga’u ta’a.
Seerichi ega ragga’een boodas hojiirra oolmaasaa dhaabbanni hordofuu fi to’atu kan hundaa’u ta’a.
Dhaabbileen hundaa’anis dhimmoota mootummaa waliinii kan ta’anirratti yaada dhiyeessurraa kaasee amma murteessisuutti, hojiirra oolmaa isaaniis amma hordofuutti aangoo qabaatu.
Oduuwwan Biroo « Sabbataatti ragaa sobaatin uummata burjaajessaa kan turan to'annoo jala oolan	Muummichi ministiraa mana mareetti argamuun gaaffilee dhiyaataniif deebii laatan »
Darbiin Shaggar 38ffaan har’a ni gaggeeffama
Oduuwwan Wiixata Ebila 15 2010 E.C.
Oduuwwan Wiixata Ganaama Ebila 15 2010.
Oduuwwan Sabata Elba 14 2010 E.C.
Oduuwwan Dilbaata Ganamaa Elba 14 2010
Oduuwwan Sabata Elba 13 2010 E.C.
Oduuwwan Sabata Ganamaa Elba 13 2010
Oduuwwan Jimaata Elba 12 2010 E.C.
Oduuwwan Jimaata Galgalaa Elba 12 2010
Oduuwwan Jimaata Ganamaa Elba 12 2010
Oduuwwan Kamisa Ebila 11 2010 E.C.
Oduuwwan Kamisa Galgala Ebila 11 2010.
Oduuwwan Kamisa Ganaama Ebila 11 2010.
Oduuwwan Roobi Ebila 10 2010 E.C.
Oduuwwan Roobi Galgala Ebila 10 2010.
Oduuwwan Roobi Ganaama Ebila 10 2010.
Oduuwwan Kibxata Ebila 09 2010 E.C.
Oduuwwan kibxata Galgalaa Ebila 09 2010.
Oduuwwan kibxata Ganaama Ebila 09 2010.
Oduuwwan Wiixata Ebila 08 2010 E.C.
Oduuwwan Wiixata Galgalaa Ebila 08 2010.
Oduuwwan Wiixata Ganaama Ebila 08 2010.
oduuwwan Dilbata Ebila 07 2010 E.C.